Ndeapi mana akakosha maitiro e ballet? - Nhau - Fitdance ballet tutu fekitori.
Imba > Nhau > Indasitiri nhau > Ndeapi mana akakosha maitiro e ballet?
Ndezvipi zvinhu zvina zvakakosha zveballet?
A: Art ine yayo yakasarudzika mitemo uye hunhu, ballet yakafanana, isu tinofanirwa kutanga tadzidza kukoshesa theballet art, tinzwisise ruzivo rwekutanga rwe ballet, kuti zvive nani kudzidza ballet.
Runako rwe ballet runonyanya kuratidzwa mu "kuvhurika, kutambanudza, kutwasuka uye kumira" Kune vana, izvi zvese kudzidziswa kwesainzi.
1. "Vhura" inosimbisa kuenzanirana kwepafudzi, chipfuva, tambo, mabvi uye majoini majoini, ayo anowedzera kutambanudzwa kwemitsara yemunhu uye inowedzera kugona kuita kwemaoko emunhu, kuitira kuti vana vagone kushamisira uye vazivise pachena masitayera akanaka munzvimbo isina kukwana ye danho.
2. "Taut" ndiko kuwedzerwa kweiyo instep, iyo inowedzera kureba kwegumbo uye inopa ankle simba rakasimba. Bhallet imhando yehunyanzvi hwemutsara, chete kuburikidza nekutambanudza munzvimbo shoma spaceto inoita kuti kupera kwemuviri kuve nemwaranzi, saka kuti kutamba kwanyanya.
3. "Yakatwasuka" zvinoreva kuti muviri wese wakamira, uye muviri wakangotarisa pasi, zvinova ndiwo musimboti wehunyanzvi. Chete kana muviri wese wakasungwa nekusundidzirwa kumusoro mudenga, uye simba rakanangidzirwa panzvimbo mutsetse wemunhu, ko kutenderera kungatanga kufamba here, zvikasadaro kutenderera kose kunobva kunze kwemubvunzo.
4. "Kumira" kwakavakirwa pa "kutwasuka", uye sublimation ishanduko kubva parunako rwekuenda kune runako rwekutamba, izvo zvinoda kuti muviri uve wakareba, zvichiratidza royaland chimiro chepamusoro chekumira uchizvikudza nekumanikidza.
Yapfuura:Kwakatangira tutu ballet
Tevere:Iwe unoziva here chimwe chinhu nezve tutusï¼Ÿ